Inona no atao hoe debranding? | Creatives Online
Ny fironana debranding marika dia paikady efa nozahana tato anatin'ny taona vitsivitsy, satria orinasa maro no nahatsapa fa tsy ilaina ny manova ny sarin'ny orinasa iray manontolo, fa ilaina ny manamboatra tsipiriany vitsivitsy. Indrisy anefa fa imbetsaka no tsy raisina an-tsaina fa ny debranding dia tsy midika fotsiny hoe manova ny sarin'ny marika, fa koa dia manondro ny fanovana ny anarana, ny fomba iresahana ny marika ary ny lafiny anatiny sasany.
Noho izany dia zava-dehibe ny mitadidy fa ny orinasa tsirairay dia samy hafa ary izany ny fanapahan-kevitra debranding dia tsy maintsy ataon'ny manampahaizana manokana amin'ity sehatra ity. Izany no mahatonga ny orinasa efa an-taonany maro teo amin'ny tontolon'ny serasera ary mahafantatra ny fahafaha-manao rehetra atolony. Ao amin'ny tontolon'ny varotra, ny debranding dia antsoina hoe dingana amin'ny fizotran'ny marika na vokatra, izay esorina ny toetra, ny anarana na ny loko izay mamaritra ny marika teo aloha.
1 Inona avy ireo toetra mampiavaka ny debranding?
1.1 Fanovana paikady ara-barotra
1.2 Fitafiana marika
1.3 Volan'ny vokatra
1.4 Fiovana amin'ny haavon'ny kalitao
1.5 Tsy fahampian'ny tombombarotra
2 Ny loza ateraky ny debranding
3 Ohatra amin'ny debranding
Inona avy ireo endri-javatra do demarikama-?
Debranding, fantatra ihany koa amin'ny hoe desbranding, no hetsika fanalana marika. Izany hoe, ny dingana fanesorana na fanovana ny marika vokatra na serivisy. Iray amin'ireo lehibe indrindra izy io tetik'asa ara-barotra manome aina vaovao ho marika. Ny antony mahatonga ny orinasa hanapa-kevitra amin'ny debranding dia mety:
Fanovana paikady ara-barotra
Raha manapa-kevitra ny hanova ny paikady ara-barotra ny orinasa iray, Ny marika dia mety ho iray amin'ireo zavatra voalohany hiova. Noho izany dia mahazatra ny manapa-kevitra amin'ny debranding, satria mety ho mora kokoa noho ny fanovana ny anaranao izany.
Tena mahazatra ny marika miharatsyNa dia mety ho haingana kokoa aza ity dingana ity raha nanao fahadisoana ara-barotra ny orinasa.
Rehefa lasa marika avo indrindra amin'ny sokajy misy azy ny marika iray dia manjary very ny lanjany. Amin'ny lafiny iray, iharan'ny mety hisian'ny saturation tsena, izay mety hampihena ny varotra. Amin'ny lafiny iray, lehibe ny mety hisian'ny mpanamboatra hafa amin'ny vokatra mitovy amin'ny sokajy mitovy aminy.
Fiovana amin'ny haavon'ny kalitao
Rehefa miova ny kalitaon'ny vokatra na serivisy iray, dia mety ho very ny lanjany ny marika. Ohatra, raha manomboka manamboatra vokatra ratsy kalitao ny mpanamboatra vokatra hatsaran-tarehy, dia mety hijanona tsy hividy amin'izy ireo ny mpanjifany.
Tsy fahampian'ny tombombarotra
Orinasa izay tsy miteraka tombotsoa Amin'ny marika iray dia azonao atao ny manova azy ho an'ny iray hafa izay mahasoa.
Ny fanavaozana ny marika dia iray amin'ireo fomba mahomby indrindra hanovana ny endriky ny orinasa.
Ny loza ateraky ny demarikama-
Tsy maintsy tadidinao foana ny tombony sy ny fatiantoka mety hitranga amin'ny paikady ara-barotra rehetra. Amin'ireo rehetra ireo dia mety misy andiana risika izay tsy hita raha vao jerena. Debranding dia teknika fandraharahana vetivety. Ny fahombiazany dia eo amin'ny fiantraikany voalohany sy ny fahatokisana azony aterany. Na dia manana vintana tsara hahombiazana aza izy, dia tadidio fa feno risika izy io. Raha manana sary marika tsara ny mpanjifa dia ambany kokoa ny risika.
Ny marika amin'ny orinasa lehibe dia manana fahalalana sy fahatokisana ambony kokoa, ka mety hisy fiantraikany amin'ny lazany. Ny debranding dia tsy paikady azo ampiharina amin'ny marika rehetra. Ireo marika afaka mandray soa avy amin'io teknika io dia tsy maintsy manana toetra miavaka sy azo fantarina indray mandeha. Na ny loko na ny endritsoratra orinasa, izay manampy ny mpanjifa hamantatra ny marika raha vao jerena.
Mifototra amin'ny risika voalazanay, ny zava-dehibe kokoa, izay mety hisy marika, dia ny fahaverezan'ny marika. Ny fanafoanana ny anarana na ny logo dia mety midika fa very ny soatoavina izay mamaritra ny marika.
Ohatra amin'ny debranding
Nanapa-kevitra ny hanala ny anarana tao amin'ny fonony ny Cola Cola ary ho solon'izay nanapa-kevitra ny hanome anarana olona na teny toy ny rahalahy, anabavy, dada na reny. Ny fiantraikany dia tena nahomby izy ireo ary nisy akony tamin'ny fivarotana ny orinasa, nampitombo azy ireo.
Fantatsika rehetra fa tsy mivarotra kafe ny Starbucks, raha tsy traikefa. Nandritra ny taona maro dia nanova ny sariny ihany koa ity rojo ity, nanafoana ny anaran'ny marika ary tsy nitazona afa-tsy ny logo. Ny tanjony dia mampiray ny marika amin'ny vahoaka hanohizana ny maha-iray amin'ireo fivarotana kafe lehibe miresaka kafe manerantany. Izany dia noho izany Nanapa-kevitra ny hampiditra ao anaty fitoerany izy ireo mba hitondrana ny anaran’ny olona.
Rehefa noforonina ity marika ity dia fantatra amin'ny anarana hoe Pepsi Cola, ankehitriny ny marika nanapa-kevitra ny handao ny teny Cola ary hifikitra amin'ny Pepsi ihany. Ity marika ity dia fantatra amin'ny marika, ny faribolana misy loko manga, mena ary fotsy. Ny loko sasany manana tonalité azo fantarina rehefa miaraka.
Ny antony nampiasana an'io paikady io dia tsy inona fa ny hanamafisana ny soatoavin'ity orinasa ity, satria nandritra ny tantarany dia nanova ny fango imbetsaka izy ireo ary midika izany fa ny sarin'ny marika sy ny varotra dia nisy fiantraikany. .
Teo aloha, ity marika Espaniola ity dia fantatra amin'ny anarana hoe Telefónica. Ny tanjony dia ny hanova ny tanjona ary hitondra izany amin'ny mpihaino tanora kokoa. Nanomboka tamin'ny taona 2010 dia nanomboka nampiasa ny anarana hoe Movistar izy ireo.
Amin'izao fotoana izao dia nahena ho M ho an'ny Movistar ity orinasa ity. Izy ireo dia nisafidy ny hanafoana ny misongadina sy misongadina izay nananan'ny M teo aloha, ary koa ny fiaviana miandalana. Amin'izao fotoana izao ny M dia mendri-piderana sy tsotra kokoa ary azo jerena amin'ny loko maro, manga, fotsy, na maitso. Tamin'ity fanovana ity dia te-hiantoka izy ireo fa ho tonga amin'ny taranaka teknolojia vaovao ny marika, manaja ny soatoavin'ny marika.
Wetransfer es un fanompoanaio -tserasera donde puedes zanair firaketana an-tsoratra dede tu ordenniankohoka for de puedas enviarlo a tus fifandraisanaianao. Ny tranga fanavaozana ity marika ity dia mitovy amin'ny an'ny Pepsi, ity marika ity dia nanapa-kevitra ny hanala ny "Transfer" ary ny "We". Ny tanjona dia ny hifandray amin'ny fiarahamonina misy azy ireo. Eny, tsy tiany ho toy ny pejy ahafahanao mandefa rakitra mora kokoa ny sehatra misy azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inona no atao hoe debranding?